Ny fitokonana Ryanair dia hiteraka korontana amin'ny faran'ny herinandro
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny fitokonana Ryanair dia hiteraka korontana amin'ny faran'ny herinandro
Airlines • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany Italia • Vaovao • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Jolay 23, 2020
Mpandeha maherin'ny 100,000 eto an-tany, sidina 600 no nofoanana, seranam-piaramanidina manerana an'i Eropa amin'ny savorovoro. Ity no vokatra mahatsiravina ateraky ny 2 andro Ryanair fitokonana nambaran'ny ekipa mpiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Espana, Portugal, ary Belzika ny sabotsy 25 jolay ary ny alahady 26 jolay izay hisy fiatraikany amin'ny fifandraisana amin'i Italia sy avy any Italia koa.
Ny orinasa Irlandey dia nanamafy ny fanetsehana ny mpiasan'izy ireo tamin'ny bitsika iray ary miomana hiatrika ny iray amin'ireo herinandro sarotra indrindra amin'ny tantarany 30 taona. Ny fanafoanana dia hisy fiatraikany amin'ny sidina 200 isan'andro mankany Espaina, 50 mankany Portugal, ary 50 mankany sy avy any Belzika.
Ny sidina nesorina dia maneho ny 12% amin'ireo fifandraisana Ryanair rehetra natao tany Eropa. Ho fanampin'izany, fikomiana ataon'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina Italiana ny fandaharam-potoana amin'ny 25 Jolay. Nanambara ihany koa ny zotram-piaramanidina fa ny mpandeha rehetra tratry ny fanafoanana dia hampandrenesina amin'ny alàlan'ny mailaka na hafatra an-tsoratra ary afaka mahazo onitra hafa na tapakila.
Ny ekipan'i Ryanair dia niantso ny fitokonana mba hitakiana ny karama ambonimbony sy ny toe-piainana tsara kokoa.
Tokony hiampina ny sandriny koa ny mpanamory azy amin'ny 30 Jolay sy 3 Aogositra.
Ny fangatahan'ny mpiasa lalina
Misy fangatahana 34 ataon'ny mpiasa ao amin'ilay orinasa. Manomboka amin'ny fanapaha-kevitra tsy handoa bebe kokoa amin'ny fanamiany, sakafo sy rano izy ireo; ny fifaninanana nangatahana tamin'ny mpiasa mba hivarotra vokatra bebe kokoa ao anaty fiaramanidina; ary fialan-tsasatra.
Tao anaty naoty nalefa tany Corriere della Sera (isan'andro), Ryanair dia nilaza fa tsy misy dikany ny fangatahan'ny mpiasa. Ny mpikarakara sidina dia mahazo hatramin'ny 40,000 € isan-taona, mihoatra ny avo roa heny amin'ny karama ilaina mba hiainana. Ny fiovana ataon'izy ireo dia napetraka amin'ny 5-3 (asa 5 andro sy ny 3 fitsaharana), ary tsy afaka manidina mihoatra ny 900 ora isan-taona izy ireo.
Ryanair dia mikasa ny hanidy ny tobiny alemana ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt Hahn amin'ny Novambra. Ny biraon'ny seranam-piaramanidina Berlin, Tegel, ary Duesseldorf dia mety hifarana amin'ny faran'ny volana septambra.
"Ny fanapaha-kevitra," hoy ny fanamarihana avy amin'ny orinasa Irlanda, "dia nalaina taorian'ny nandavan'ny mpanamory fiaramanidina Alemanina ny fanapahana ny karama farany ambony" izay namboarina noho ny fiatraikan'ny areti-mandringana. “Ny Vc (sendikan'ny mpanamory fiaramanidina) dia niresaka momba ny fanapahana mpiasa sy ny fanidiana ny tranokalan'izy ireo raha toa ka afaka niantoka ny asa rehetra izy ity,” hoy i Shane Carty, mpitantana ny mpiasa eto Ryanair.
Amin'ny lafiny iray, ny VC dia namaly fa noheverin'izy ireo ho tsy ampy ny fifanarahana tamin'ny zotram-piaramanidina. Raha ny marina dia ny asa ihany no azo antoka raha tsy ny volana martsa 2021, raha toa ka tsy nampoizina ny fihenan'ny karama mafy hatramin'ny 2024.